Ukwemukela umhlaba, uKaiquan wenze intuthuko entsha ezimakethe zaphesheya kwezilwandle
NgoJulayi 3, 2019, iziqukathi ezintathu ezingama-40-foot zathunyelwa ngempumelelo zisuka ekomkhulu laseShanghai leqembu le-kaiquan zaya ethekwini le-ho chi minh, eVietnam, okukhomba intuthuko enkulu emakethe yaphesheya yeqembu le-kaiquan, ibhizinisi elihamba phambili embonini yepompo yamanzi .
Ngokwokuhlelwa kwamasu weqembu kanye nomoya wemiyalo kaMongameli Lin, umnyango wezamabhizinisi aphesheya kwezilwandle uzosebenzisa uhlelo lokuphathisa olunikezwayo ngo-2019. Ezinyangeni ezimbalwa, abalingani abanamandla bamazwe angaphandle basayine izinkontileka neqembu le-kaiquan. Muva nje, amanxusa amaningana anamandla kanye nenkampani kaiquan asayine ama-oda amakhulu. Ngemizamo yabo bonke ozakwethu bomnyango wamabhizinisi aphesheya kwezilwandle, ekugcineni sithele izithelo ezicebile kuleli hlobo elishisayo!
Inani laseningizimu ye-Vietnam ejenti lesayina likhulu, amacala esewonke angama-626, afaka ukugxisha ipompo lensimbi engagqwali, ipompo lokukhucululwa kwendle kanye nesigaba esisodwa sepompo ye-centrifugal, yonke imikhiqizo ye-oda enezincazelo, isikhathi esifushane sokulethwa, kanye nezimpawu zezidingo ezisezingeni eliphakeme, ukuze uqedele leliqoqo lama-oda, ngekhwalithi enhle eqenjini lezinkampani nasegatsheni eliyisithupha, ifektri ye-hefei nefektri esifundazweni saseZhejiang ngokuxhaswa abaholi kanye nozakwabo, yonke iminyango ukuphuma konke, ihlele ngokucophelela ukukhiqizwa, ikakhulukazi ozakwabo abaphambili bathatha isinyathelo sokusebenza isikhathi esingeziwe, ukucubungula ngokucophelela nokuhlanganisa, babheka ukubaluleka okukhulu kusixhumanisi sokuhlolwa komkhiqizo nokupakisha, ngemuva kokuthi iqembu lezinkampani lisebenzisana kakhulu nomnyango ngamunye, Ukuqedwa kokugcina ngempumelelo kwale nqwaba yama-oda, kube kakhulu banconywa amakhasimende eVietnam.
Ukulethwa kwaleli qoqo lama-oda kuyisiqalo esihle nje sokwahlukaniswa kwamabhizinisi aphesheya kwe-kaiquan ekwakhiweni kwama-ejenti amakhulu aphesheya kwezilwandle. IKaiquan izogcina engqondweni inhloso yayo futhi ilwele ukudala umhlaba obanzi ekuthuthukiseni imakethe yamaphampu aphesheya kwezilwandle.